QR Code Reader and Scanner: Android အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Android အတွက် App ကို: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကိုနှင့် Scanner
အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက် App ကို: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကိုနှင့် Scanner
Android အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ Kaspersky QR Scanner သငျသညျကို malware ရန်သင့်ထံသို့ သွား. ဖော်ထုတ်ချင်နဲ့ထောင်ချောက် phishing ပါဘူးတစ်နေရာရာကိုသင်ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအန္တရာယ်များလင့်များ်လူဆိုးစာရင်း QR codes တွေကိုထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးသည်တဲ့စမတ်ဖို့အတွက် QR စာဖတ်သူကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလေးကို QR စကင်နာများနှင့် QR စာဖတ်သူကိုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
ချက်ချင်းသငျသညျ scan ဖတ်နေသော QR ကုဒ်ကိုဆက်စပ်စာသားများ, ရုပ်ပုံများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဘေးကင်းမှုစစ်ဆေးပါ။
•အန္တရာယ်များတဲ့ QR ကုဒ်ကိုနောက်ကွယ်မှမုသာမပါလျှင်တပ်လှန့် Get
သင်တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးကြောင့်အန္တရာယ်များတဲ့ link ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသင်ညွှန်ကြားဖို့ကြိုးစားမှုများပါဝင်သည်သည့်အခါချက်ချင်းသတိပေးရယူပါ။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာ - - သင့်ဖုန်းမဆိုအမှားများကိုမပါဘဲသင်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်သစ်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါကအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ပြားပေါ်တွင် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူသည်။
သင်တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးတာနဲ့သင်အလွယ်တကူအတိတ်လင့်များ, ရုပ်ပုံများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်, သတင်းအချက်အလက်များသင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
• Access ကို Wi-Fi ကိုလျင်မြန်စွာ
အထောက်အထားများကို set up လုပ်ဖို့ QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်ခြင်းနှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းက Wi-Fi ချိတ်ဆက်ရလိမ့်မည်။
အစာရှောင်ခြင်းနှင့် Android များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ QR စကင်နာများနှင့်လုံခြုံ scan လုပ်ပါ။
တွေ့ကြုံခံစားနှင့်အခြား Kaspersky Lab မှ၏ကိရိယာများနှင့် applications များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် free.kaspersky.com သွားရောက်ကြည့်ရှု!
လုံလုံခြုံခြုံသင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ, အသုံးပြုမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ AppLock အရာဓာတ်ပုံ Vault, ပုဂ္ဂလိကတမန်, လူမှုကွန်ယက်များ, setting များနှင့်အခြားသောကဲ့သို့သင်၏မိုဘိုင်း app များကိုပိတ်ဆို့နှင့်ရှိသူများဝင်ရောက်ဖို့လျှို့ဝှက် password ကိုရိုက်ထည့်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။
Android အတွက် App ကို: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကိုနှင့် Scanner
12.70 ကို MB